Recovery Barzakh - Ladnaansho tirtiray / qoruhu badiyay Windows / Mac
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado qoruhu in Windows / Mac
Marka recieving disk adag, users u nugul u qaybinaya galay dhawr maqaal qoruhu hor inta aadan isticmaalin, taas oo u wanaagsan maaraynta xogta iyo qabano isticmaalka ee bannaan. Sidoo kale, in uu kaydiyo xogta ee qoruhu oo kala duwan ayaa ka hortagi kara khasaaraha ka mid ah xogta. Si kastaba ha ahaatee, masiibooyinka mar walba ku dhacaa markii aadan ayaa diyaar u ah. Maxaad samayn doontaa haddii aad ku lumen xijaab oo dhan, halkii ay ka folder hal ama dukuminti ah? Ma jirtaa xal u samayn ah soo kabashada xijaab si ay kaaga caawiyaan in aad dib u hesho xogta oo dhan ka Risaalo in uu lumo?
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada xijaab u Windows ama Mac ah?
Haa, waxaa jira hab kaa caawin kara inuu ka soo kabsado paritions aad laga badiyay. Dhab ahaantii, waxa aan jeclaan file hal ama folder, waa arrin fudud in la overwritten by xog cusub haddii aadan si fiican ma loo ilaaliyo ka dib markii khasaaraha. Qoruhu lumay ma ay fududdahay in la overwritten si ay u la raadsan karaa fursad weyn. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa software kabashada xijaab smart . Haddii aad waxa ay sugayaan midkood, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Data Recovery for Windows kabashada xijaab , ama Wondershare Data Recovery for Mac haddii aad isticmaalayso Mac OS. Labada iyaga ka caawin kartaa in ay dib ugu heli qoruhu lumay si buuxda oo aan khasaaro xogta.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad free hoose si scan u qoruhu aad laga badiyay iyo hubiyo xogta lagu kaydiyaa iyaga ku hor intaadan bixin.
Halkan ha u fuliyaan kabashada xijaab in Windows la tallaabooyinka faahfaahsan. Wixii faahfaahsan hage, fadlan tag kabashada xijaab Mac .
Ku rakib iyo waxa maamula on your computer. Waxaa jira laba qaabab u soo kabashada xogta, ee Wizard iyo Standard Mode ah. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah ka fuliyo kabashada xijaab .
Saaxir ah: hab kabashada Tani waa arrin saaxiibtinimo oo ay bilowga ah, waayo, ma jirto laba kaliya su'aalo fudud u isticmaala si aad u hubiso jawaabaha. Markaas barnaamijka samayn doonaa bidix oo dhan.
Standard Mode The: Waa wax fiican u soo maray users computer. Waxay bixisaa fursado kabashada kala duwan ee isticmaala uu ka soo xusho.
Labada Standard Mode iyo Wizard waa arrin fudud in ay ku shaqeeyaan. Halkan aynu horay ula Standard Mode ah, oo waxaad tagtaan dalka "Recovery ah Barzakh," doorasho.
Step2. dooro drive jirka lagu sawiro
Waxaad dooran kartaa adag drive computer ee, ama drive dibadda adag haddii aad rabto inuu ka soo kabsado Risaalo ka lumay ka ah drive dibadda adag. Markaasuu ku biiro "Next" si ay u bilaabaan ka scan xijaab laga badiyay.
Step3. Dooro xijaab u soo kabashada
Scan disk ka dib, oo dhan laga badiyay iyo qoruhu recoverable lagu soo bandhigi doonaa. Disavantage waa magacyada asalka ah xijaab aan laga celinayne helay, oo ay la baxshay. Ku dhowaad dhammaan of software kabashada Risaalo aan dib ugu heli magacyada asalka ah, iyo rajaynayaa in ay si degdeg ah wax looga qaban karaa. The dhibic wanaagsan waa in aad kala saari karaa Risaalo aad rabto in ay le'eg. Ka dib markii xulashada Risaalo ka, si ay u sii wadaan scan "Start" file inuu dib u helo oo dhan xog ku saabsan Risaalo.
Step4. Kabsado files xijaab
Haddii aad dooratay Wizard ah si ay u qabtaan soo kabashada Risaalo, waxa kale oo aad u baahan tahay oo kaliya in ay sameeyaan tallaabooyinka la mid ah dhammayn:
1. Hubi nooca file in aad rabto in aad ka soo kabsado Risaalo ka lumay, sida sawir, video, dukumenti, audio, iwm Waxa kale oo aad eegi kartaa iyaga oo dhan ah.
2. Dooro meel u scan. Si aad u soo kabsado qoruhu lumay, waxaad u baahan tahay si aad u hubiso "Anigu ma heli karo maqaal qoruhu aan".
3. In loo sahlo baaritaan qoto dheer iyo dooran drive jirka si scan.
4. Dooro xijaab lumay aad rabto in aad soo kabsado oo uu bilaabo inuu iskaan xogta lagu kaydiyaa it on.
5. Ladnaansho files ka Risaalo ka lumay.